Wararka Maanta: Arbaco, May 2 , 2012-Doorashada Duqa Magaalada iyo Golaha Degaanka ee London (UK)
Labada Musharax Ken Livingstone iyo Boris Johnson. Photograph: Katherine Rose; Getty. The Guardian
Waxaa kaloo la dooran doonaa 14 xubnood oo matala xaafadaha (Constituency) iyo 11 xubnood oo iyaga iska sharaxaya dhammaan London oo dhan; 25 kan xubnood ayaa noqon doona golaha degaanka ee London lana shaqayn doonaa duqa magaalada ee la soo doorto.
Doorashadan waxaa wax dooran kara dadka ka soo jeeda Britain, wadamada Barwaaqosooranka iyo Midowga Yurub oo da’doodu dhan thay 18 jir iyo ka weyn kana qoran diiwaanka doorashada.
Doorashada waxay bilaabaneysaa 7:00 subaxnimo ilaa waxay soconeysaa 10:00 fiidnimo. Dadka diwaangashan waxaa loo soo diray kaarka codeynta oo dushiisa aad ka helayso khariidad yar oo sheegaysa goobta aad ka codeyn lahayd oo aalaaba aan ka fogeyn degaankaada. Waxaad ka codeyn kartaa oo kaliya goobta laguu cayimay. Fadlan sii qaado dukumenti sida batantaha (Driver License ama Professional Driver License) ama basaboorkaada iyo kaarka codeynta.
In laga codeeyo wadamada reer galbeedka ma xalaalbaa mise xaraan? Ma ahi qof ku takhasusay fiqi-ga balse waxaan arrinka kala sheekeystay culimo badan oo Soomaaliya uu ku jiro Sheekh Usuuli. Sheekh Usuuli iyo culimadii kale aan la hadlay waxay yiraahdeed qofka muslimka wax waa dooran karaa si uu u fushado masalaxada degaanka uu ku nool yahay.
Ururka ay ku bohoobeen Muslimiinta Biritain wuxuu ku boorinayaa muslimiinta in ay codkooda dhiibtaan. Waxaa kaloo jira wadankan haddii aadan codeyn macnaheeda ma aha in aadan ka qeyb qaadan codeynta. Tusaale ahaan xaafaddaada hadday ku badan yihiin dadka taageera xisbiyada xag jira oo xisbiyadaasi soo abaabulaan taageerayaashooda oo tagaarayaashooda ugu bataan dadka codeeyey; ogow intii ka aamustay oo hadday codeeyaan keeni lahayd axsaabtan xag jirtaa inaaney waligood soo bixin, inaad si dadban u tagaarteen xisbiyada xag jira. Soomaali waxay ku maahmaahday nimaan (qofaan) hadalin hooyadiis wax ma siiso.
Sidaas darted waxaan qabaa in loo dareero doorashada oo laga muuqdo diwaanka coddadka ee aan loo isticmaalin baasaboorrada inaan ku safarno oo kaliya basle aan garanno maslaxadda mandaqada aan ku nool nahay. Waxaa lagu qiyaasaa dadka soomalida ah ee London deggan inay dhan yihiin ilaa 200 oo kun oo haddi badh ka mid ah doorashada ka qeybgalaan wax weyn ka badeli karaan nidaam siyaasadeeedka London. Ma ku dhihi karo musharax hebel u codee basle inaad fakirto isweydii maslaxadaada bulsho (Somaali) iyo taada qoys sida waxabarashada iyo caafimaadka; waxaa kaliya oo iga dardaaran ah inaan lagoo qarin musharaxiinta xisibiya xag jira oo ka mideysan ajnabi naceyb-ka.
Waxaan kusoo gunaanadeyaa in doorashada golayaasha degaan ay ka dhaceyso magaalada Liverpool oo la dooran doono duqii u horreyey iyo golaha degaankaba Waxaa ku boorrinayaa Soomalida deggan magaaladan fadlan u dareera doorasha 3-da May idinkoo dabaqaya daardaarankii aan siiyey reer London.
Sidoo kale magaalooyinka Birmingham, Bristol, Coventry, Leeds, Manchester, iyo Sheffield waxaa ka dhacaya referendum la weydiinayo dadweynaha inay mustaqbalka yeeshaan duqa maagaalada oo toos loo soo doorto ama in siday hadda tahay loo daayo, oo ah in xisbigii ku guuleysta doorashada hoggaamiyahiisa inuu noqdo hoggaamiye siyaasadeedka magaalada iyo maamule madani ah (Chief Executive) ka amarqaata hoggaan siyaasadeedka talada haya.
Tan waxaan ka dhihi lahaa fadlan dhegeysta dooda labada dhinic ee raaca dhanka maslaxada bulshada Soomaliyeed ay ku jirto. Fadlan ha loo dareero doorashada si aan u dhowrno maslaxada bulsho weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan.
Mahadsanidiin dhamaantiin; waxaan qalday garasho xumadeydaa ii geysay waxaan saxayna Eebaa i garansiiyey.
Wixii faahfaahin dheeraad ka daalaco boggagan:
Hashim Ismail Duale
MBE (Member of the Oder of British Empire)
Adeega Bulshada UK